Global Voices teny Malagasy » Nofy Tsy Ho Tanteraka Ny Hahitàna Efitrano Ho An’ny Tena Samirery Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Jolay 2015 4:06 GMT 1	 · Mpanoratra Sofus Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna
Ny trano fonenana ao Hong Kong no faran'izay lafo indrindra sy tsy mora idirana eto an-tany, araka ny Fanadihadiana farany Nataon'ny “Annual Demographia International Housing Affordability Survey” – fanadihadiana atao isan-taona erantany momba ny fahafahana mahazo trano fonenana . Miaraka amin'ny saran'ny trano fonenana efa ho im-17 avo heny amin'ny vola miditra isan-taona, very fanantenana ny amin'ny hahafahany mahazo efitrano ho azy ireo  ny tanora eo anelanelan'ny 19 sy 29 taona.
Araka ny fanambaràn'ny governemanta, ny salan-karama amin'izao fotoana izao isam-bolana dia manodidina ny HK $15,000  (eo amin'ny US $1,950), raha ny salan'ny vola miditra isan-tokantrano tamin'ny 2014 dia HK $23,500  (eo amin'ny US $3,000). Na dia toa mahavelom-bolo aza ireo tarehimarika ao amin'ity tanàna iray manana ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mora ity, dia ny resaka trano fonenana no tena mihinana ny vola miditra amin'ireo mponina ao Hong Kong.
Tany iray mirefy 37 metatra toradroa (400-square-foot) ao Tai Po, distrika iray mihataka ny renivohitra any amin'ireo Faritany Vaovao, dia tonga hatrany amin'ny HK $4.68 tapitrisa , in-200 avo heny amin'ny salan'ny vola miditra isan-tokantrano. Amin'ny teny hafa, ny fianakaviana salantsalany iray dia mety handany ny vola niditra tamin'ny nandritry ny 16 taona sy tapany hividianana iray amin'ireo tany mora indrindra ao an-tanàna.
Na ohatra aza ny olona iray ka avy nahazo ny laharana voalohany tamin'ny loka fanome amin'ilay lalao fisarihana lehibe indrindra ao an-tanàna, ny Mark Six , mety tsy hahavita akory hividianana efitrano sahaza ilay vola azo tamin'ny loka raha toa izy ratsy vintana mila mifampizara ny lokany amin'olona hafa. Eo amin'ny HK $8 tapitrisa eo ilay loka voalohany, saingy raha toa ianao tsy maintsy hifampizara amin'olona hafa, ny antsasany ihany no anjaranao .
QC, mpanao gazety mpanoratra fandalinana ao amin'ny sehatra median'olontsotra inmediahk.net, nizara ny fahatsapana ho very fanantenana  momba ny fidangan'ny vidim-pananana :
Tse Kwun Tung, mpanao gazety iray hafa avy ao amin'ny inmediahk.net, nanao lisitra ireo fepetra telo ilain ‘ireo tanora mba hahazoana efitrano ho azy manokana :
Tsy ifampizarana amin'ireo sehatry ny fandraharahan'ny mpanankarena ny olan'ny tsy fananana trano ho an'ny tena. Rehefa nanome torohevitra i Lau Ming-Wai, zanakalahin'ny mpanakarem-be iray ao an-toerana, hoe raha toa ny tanora amin'ny taonany mandany volakely amin'ny resaka sarimihetsika sy fivahinianana any Japana , mety ho afaka hividy efitrano iray ihany ry zareo, tsy sarotra ny mahazo an-tsaina ny antony nanarian’ ireo mpisera ety anaty aterineto ny toroheviny. Avy ao amin'ny ampahany natao hanehoana hevitra ao amin'ny tatitry ny Passion Times :
Mety ho nofinofy tsy azo tanterahana ny fanantenana ny hisian'ny fitontonganan'ny vidin-trano araka ny torohevitr'i Lau, hoy ireo manampahaizana manokana. Tsy hoe natao ho an'ireo tinady eo an-toerana ihany ny tsenan'ny fananan-tany sy trano ao an-tanàna fa koa ho an'ireo shinoa marobe mpanankarena mpampiasa vola avy any amin'ny tanibe. Ny tolotra momba ny tany  amin'ny hoavy dia hiatrika fanamby noho ny fitobohan'ny ara-politika, hatramin'ireo olana momba ny tontolo iainana sy ny fitahirizana azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/10/71700/
 Fanadihadiana farany Nataon'ny “Annual Demographia International Housing Affordability Survey” – : http://www.demographia.com/dhi.pdf
 amin'ny hahafahany mahazo efitrano ho azy ireo: http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1745251/hong-kong-property-prices-out-reach-majority-would-be-flat-buyers
 HK $15,000: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20150321/19084603
 HK $23,500: http://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/population.pdf
 HK $4.68 tapitrisa: http://proptx.midland.com.hk/cs/detail_layer.jsp?cs=y&stockId=NT290026
 Mark Six: https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Six
 nizara ny fahatsapana ho very fanantenana: http://www.inmediahk.net/node/1033187
 ireo fepetra telo ilain: http://www.inmediahk.net/node/1034482
 mandany volakely amin'ny resaka sarimihetsika sy fivahinianana any Japana: http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/news/20150520/53757399
 tolotra momba ny tany: http://www.master-insight.com/content/article/3918